नम्बर2समर 2017 | इनाम पुरस्कार - प्रेम, यौन र इन्टरनेट
तपाईं गर्मीको आनन्द उठाउँदै आशा गर्नुहुन्छ। टीआरएफ कर्मचारीले नयाँ सिजनको लागि तयारी गरेको छ 1 सित सेप्टेम्बरमा सुरु हुने स्कूल सबकहरू, GPs र कार्यशालाहरूको लागि कुराकानी। हामी कागजातहरू लेखिरहेका छौं, धनको लागी आवेदन र सरकार, स्थानीय प्राधिकरणहरू, चैरिटीहरू र मिडियामा रहेका मानिसहरूसँग भेट्नका लागि आवेदन गर्दछ जसले हाम्रो काम अगाडि बढाउन मद्दत गर्न सक्दछ। हामी ती सम्पर्कहरूको विकासको रूपमा हामी तपाईंलाई सूचित गर्नेछौं।
किशोर हानिकारक यौन व्यवहार रोक्न
अनुसन्धान: स्वास्थ्य केन्द्र
विद्यालयमा इनाम पुरस्कार
हामीलाई एडिनबर्गमा बोल्ने सुन्नुहोस्
संयुक्त राज्य अमेरिका मा सम्मेलन
क्रोएशिया मा पारिवारिक सम्मेलन
इवार्ड फाउण्डेशनको लागि नयाँ स्ट्रिलाइन
जर्मनी र यूकेमा बाल दुरुपयोग रोकथाम
28th जुलाई ट्राफिकले एनएएनएक्स उत्कृष्ट स्पिकरहरूको साथ नोएडा (दुर्व्यवहार स्कटल्याण्डको उपचारका लागि) द्वारा एक दिनको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिनुभयो। पहिलो प्रोफेसर क्लाउज बीयर (चित्रित), बाल यौन दुर्व्यवहार रोकथाममा एक अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ र आर्किटेक्टको थियो डुन्केल्फेलेल रोकथाम परियोजना जर्मनीमा। दोस्रो थियो ब्रिस्टल विश्वविद्यालयको एक अपराधशास्त्री, प्रोफेसर केयरन मेकर्टाटन जसले ब्रिटेनको यौन अपराधीहरूसँग डंकन्चेल्लेड परियोजनाको पाठको प्रकाशमा काम गर्ने वर्तमान र सम्भावित भविष्यका प्रतिक्रियाहरू खोजे। हाम्रो कथा हेर्नुहोस् यहाँ.
हाम्रो मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेरी मरियम शेर्पा को लागि हानिकारक यौन व्यवहार को रोकथाम मा एक 'सोच टुकडा' को सह लेखक थियो। नोट, दुर्व्यवहार को उपचार को लागि राष्ट्रीय संगठन। नोवा एक धृष्टता हो जुन यौन अपराधीहरु संग व्यवहार गर्ने पेशेवरहरुको लागि सहायता प्रदान गर्दछ। भर्खरै अनुसन्धानको यस विश्लेषणमा, मरियम स्टुअर्ट अलार्डिस, स्ट्रोट इट अबको राष्ट्रिय प्रबन्धकको नेतृत्वमा यूके-चौडाइ एक टोलीमा सामेल हुनुभयो! स्कटल्याण्ड। तपाईं यस मा एक कथा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
मैले यो समाचार पत्रको लागि चयन गरेको वस्तुलाई भनिन्छ बच्चाहरु मा इन्टरनेट पोर्नोग्राफी को प्रभाव। यो अमेरिकी कलेज बाल चिकित्सकहरु द्वारा एक नीति बयान र जून 2016 देखि मितिहरु को रूप मा लिखित थियो।
दृष्टान्त: पोर्नोग्राफीको उपलब्धता र उपयोग वयस्कों र किशोरहरु मध्ये लगभग सर्वसाधारण भएको छ। पोर्नोग्राफीको उपभोग धेरै नकारात्मक भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, र शारीरिक स्वास्थ्य परिणाम संग सम्बन्धित छ। यसमा अवसाद, चिन्ता, अभिनय बाहिर र हिंसक व्यवहार, यौन विवाहको सानो उमेर, यौन कमजोरी, किशोर किशोर गर्भावस्था को खतरा बढ्यो, र पुरुष र महिलाहरु बीच सम्बन्धको विकृत दृष्टिकोण बढेको छ। वयस्कों को लागि, पोर्नोग्राफी परिणामहरु लाई तलाक को संभावनाहरु लाई बढावा दिइन्छ जो बच्चाहरुलाई हानिकारक छ। चिकित्सकहरूको अमेरिकन कलेजले हेल्थकेयर प्रोफेसरहरूलाई पोर्नोग्राफीको जोखिमलाई रोगी र उनीहरूको परिवारमा प्रयोग गर्न संवाद गर्दछ र बच्चाहरूलाई जोगाउन पोर्नोग्राफी हेर्न र व्यक्तिहरूलाई यसको नकारात्मक प्रभावबाट पीडितहरूको उपचार गर्न स्रोतहरू प्रदान गर्न आग्रह गर्दछ।
म आमाबाबु, शिक्षकहरू र पेशेवरहरूको लागि किताब सिफारिस गर्न चाहन्छु। मानिस, अवरोध - किन युवा पुरुषहरू संघर्ष गरिरहेका छन् र हामी यसको बारेमा के गर्न सक्छौं स्ट्यानफोर्ड मनोविज्ञान प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो र निकिता कलोम्बे द्वारा छ। यसले प्रोफेसर जिम्बाबोको उत्कृष्ट4मिनेट TED कुराकानीमा बनाउँछ मान्छेहरूको कमी जुन हाम्रो सहयोगी गैरी विल्सनको लोकप्रिय TEDx कुराको साथी साथी थियो ठूलो अश्लील प्रयोग.
पुस्तक को आधार यो छ कि हामी एक नाप-साहसी नयाँ दुनिया सामना गर्दैछौं; एक संसार जसमा जवान मानिसहरू पछि पछाडि छोडिरहेका छन्। लेखकहरू भन्छन् कि भिडीयो खेलहरू र अनलाइन अश्लीलको लतले शरिरको पुस्ता, सामाजिक रूपमा अचम्म लाग्ने, भावनात्मक रूपमा हटाइदिएको छ, र जोखिम-प्रतिकूल जवान पुरुषहरू जसले जटिलताहरूलाई नेभिगेट गर्न र असुरक्षित जीवन सम्बन्ध सम्बन्धी जोखिमलाई खारेज गर्न असमर्थ हुन्छन्। , स्कूल, र रोजगारी। एक समस्या मा एक महत्वपूर्ण नजर राख्नु भनेको परिवार र अन्य समाजहरूमा आँसु पुर्याउनु हो, मानिस, अवरोध सुझाव दिन्छ कि हाम्रा जवान पुरुषहरू असाधारण लतको नयाँ रूपबाट पीडा हुन्छन्। यसले ट्रयाकमा फर्काउन को लागी बोल्ड नयाँ प्लानलाई परिचय दिन्छ।
समापन अध्यायहरूले समाधानहरूको एक सेट प्रदान गर्दछ जुन समाजका विभिन्न वर्गहरूद्वारा विद्यालय, आमाबाबु र युवा पुरुषहरू समेत प्रभावित हुन सक्छन्। एन्डिडोटहरू, आकर्षक शोध परिणाम, अवधारणात्मक विश्लेषण, र परिवर्तनको लागि कंक्रीट सुझावहरूको साथमा भरिएको, मानिस, अवरोध हाम्रो समयको लागि एक पुस्तक हो। यो एउटा पुस्तक हो जुन सूचना, चुनौतीहरू, र अन्तमा निरीक्षण गर्दछ।
गत दुई महिनामा हामीले चार जना विशेषज्ञहरू साक्षात्कार गरेका छौं।
जूनमा हामी केनेथ क्लाोगी, एडिनबर्ग आपराधिक कानून वकील यो प्रक्रिया व्याख्या गर्ने कि आमाबाबु र बच्चाले यौन अपराधको आरोप लगाउन सक्दछ भने। उहाँले इन्टरनेट अपमानजनक सम्बन्धमा अपराधहरूमा वृद्धि देख्नुभएको छ। उनको साक्षात्कार पाठ्यक्रम मा वेबसाइट मा प्रकट हुनेछ।
जुलाईमा अष्ट्रेलिया भ्रमण गर्दा हामीले लिज वाकरको साथ एक 45 मिनेट साक्षात्कार गरे सेक्स शिक्षा। लिज पहिले चरम पोर्नोग्राफीको लागी स्कूल बसमा6उमेरको उमेरमा भएको थियो। उनको कथा राम्रो पढाइ बनाउँछ। तिनी अहिले पोर्न विरोधी अश्लील अभियानकर्ता प्रोफेसर गेल डाइन्ससँग काम गर्छन् संस्कृति प्रशंसा गरियो.
Dr Paula Banca (तल चित्रित), ए तंत्रिका शोधकर्ता क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय ले उपयोगी अन्तर्दृष्टि प्रदान गरे शोध पत्र मा उनि प्रकाशित नवीनता, कंडीशनिंग र आकस्मिक पूर्वाग्रह यौन पुरस्कारमा। यो उत्कृष्ट अनुसन्धान पहिचान भएको थियो जब यसले यौन स्वास्थ्यको विकासको लागि सोसाइटीबाट 2016 अनुसन्धान पुरस्कार प्राप्त गर्यो।
स्कटल्याण्डमा फिर्ता, हामीले एन चिलटनसँग एक प्रारम्भिक साक्षात्कार गरे, सम्बन्ध स्कटल्याण्डसँग परामर्शको लागि व्यावसायिक अभ्यासको प्रमुख स्कटल्याण्डमा सेक्स चिकित्सकहरूको लागि प्रशिक्षण प्रक्रियाको बारेमा जान्न। उनले बताए कि त्यहाँ 30 प्रोफेसरहरू नजिकै छन् जुन अब जोडीहरूसँग सम्बन्ध र यौन सम्बन्धी यौन स्वास्थ्य समस्याहरूमा वृद्धि गर्न प्रशिक्षित गरिन्छ। त्यो यस बढ्दो समस्याको लागि स्कटिश सरकारबाट कति वित्तीय सहायता छ भनेर निराश भएको थियो।
TRF लाई डेलिभर गरिनेछ विद्यार्थीहरू विद्यार्थीहरूलाई एडिनबर्ग अकादमी, जर्ज वाटसन र सेन्ट कोलम्बका किममोकोम स्कूलमा स्वास्थ्य, सम्बन्ध, अपराध र रिसेप्टर 1 सेप्टेम्बरमा इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको असरमा। हामी पनि बोल्नेछौं आमाबाबु र विद्यार्थीहरू सेप्टेम्बरमा र जर्ज वाटसनको फेवास्ताको विचारमा आमाबाबुले विद्यार्थीहरू टन्सब्रिज विद्यालय, इङ्गल्याण्ड अक्टोबरमा पनि।
13 अक्टोबरमा हामी एक व्याख्यान देिरहेका छौं मेडिको-चिरर्गिकल सोसायटी एडिनबर्गकिशोर स्वास्थ्यमा इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको प्रभावको बारेमा। यो समाजले 1821 पछि मेडिकल मामिलाहरू बहस गरिरहेको छ।
आउनुहोस् र हामीलाई एनएनएनएक्सएक्स नोभेम्बरमा अगस्ट अगस्ट चर्च, एक्सएनमक्स जर्ज चतुर्थ ब्रिज, एडिनबर्ग, ईएचएक्सएनएमएक्स एक्सएनएक्सएलको अभयारण्यमा आइपुग्दा हाम्रो सीईओ मार्नी शर्पुको भागको रूपमा मुख्य स्पीकर हुनेछ। एडिनबर्ग अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र आध्यात्मिकता र शान्तिको लागि। त्यो "आध्यात्मिकता, दया र लत" मा कुरा गर्नेछ। यो आमाबाबु र स्वास्थ्य अभियानकर्ता, डगलस गेष्ट सहित, अन्य विशेषज्ञहरु संग एक प्यानल छलफल पछि लागे पछि आमाबाबु र डिप्टी टाउको शिक्षक अड्रे फेयरग्रिव सहित। राइडर फाउण्डेशनको कुर्सी डरीक्र मेडद्वारा बोल्नेहरू पेश गरिनेछ।
हामी स्वास्थ्य सेवाका प्रोफेसरहरू, शिक्षकहरू र वकीलहरूको वार्षिक सम्मेलनमा एक कार्यशाला प्रदान गर्नेछौं यौन स्वास्थ्यको उन्नतिको लागि समाज 5-7 मा साल्ट लेक सिटी अक्टोबर। यो वर्ष शीर्षक हो डिजिटल संसारमा लैंगिक स्वास्थ्य.
21st अक्टोबरमा हामी वार्षिक मा बोल्नेछौं Zagreb, क्रोएशिया मा पारिवारिक सम्मेलन "परिवार, विद्यालयहरू: लतबाट स्वतन्त्रताका लागि कुञ्जी" हकदार। हाम्रो योगदान बिहानै औपचारिक व्याख्यानको साथ सुरू हुनेछ र हामी एक दिन पछि कार्यशालाको नेतृत्व गर्नेछौं।
"इनाम, यौन र इन्टरनेट" लाई इनाम पुरस्कार फाउण्डेसन पछि हामीले भर्खरै "प्रेम र यौन मा हाम्रो मस्तिष्क" बाट परिवर्तन गरेका छौं। विचार "अश्लील" शब्द उल्लेख नगरी इन्टरनेटमा जोड लिनु हो। हामी अझै पनि दिमागको इनाम प्रणाली बारे शिक्षणमा ध्यान केन्द्रित छौं। केही मान्छेले पत्ता लगाएको शब्द "मस्तिष्क" बिस्तारै राख्नु, औषधि वा तपस्याको पूर्व-अवस्थित ज्ञानलाई हाम्रो सामग्री पढ्न आवश्यक थियो। यो मामला होइन।